Lester B. Pearson Scholarship waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee dawladda Kanada oo si buuxda loo maalgeliyo waxaad ka dalban kartaa khadka tooska ah bilaash. Waxaa jira tiro aad u tiro badan oo dowladu kafaalo qaado, iskaashi wadaag, iyo deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo oo loo heli karo ardayda Canadian-ka ah iyo ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan Kanada waxaanan ku taxnay qaar ka mid ah hoosta faahfaahinta.
Ma waxaad tahay arday Canadian ah ama caalami ah oo doonaya inuu wax ku barto Kanada iyada oo loo marayo deeq waxbarasho? Maqaalkani wuxuu noqon karaa waxaad ubaahantahay inaad kubilaabato deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo.
Kanada waxaa lagu yaqaanay inay tahay mid ka mid ah wadamada ugu aqoonta wanaagsan saaxiibada adduunka, waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo ka badan dalal badan oo si siman u horumarsan, waa amaan muwaadiniinta iyo shisheeyaha halkaas wax ku barta iyo joogitaanka dhaqamada kala duwan iyo qaab nololeedka ayaa ka dhigaya dalka xiiso leh iyo meel aad jeclaan lahayd inaad waxbarasho u aado.
1 Ku saabsan Fulinta Maalgelinta Deeqaha Dowladda Kanada
1.1 Shuruudaha Codsiga Deeqda-waxbarasho ee Dawladda Kanada
1.2 Sida loo Codsado Deeqda waxbarasho ee Dawlada Kanada
2 Deeq waxbarasho oo buuxda oo ay siiso Dowlada Kanada
2.1 MASTERCARD FOUNDATION SCHOLARSHIP - JAAMACADA BRITISH COLOMBIA
2.2 LESTER B. DUGSIYADA Pearson
2.3 JAAMACADDA DUGSIYADA MANITOBA
2.4 VANIER CANADA OO AQOONSADAY DUGSIYADA
2.5 DUGSIYADA JAAMACADA YORK
2.6 DUGSIYADA HUMBER COLLEGE
2.7 JAAMACADDA DUGSIYADA CALGARY
2.8 PIERRE ELLIOT TRUDEAU FOUNDATION SCHOLARSHIPS DHAQAALAHA
2.9 ALGONQUIN COLLEGE OO AQOONSADAY DUGSIYADA
2.10 ISKUULKA AQOONSIYADA JAAMACADDA EE LAGU QAADO
2.11 JAAMACADDA DUGSIYADA MADAXWEYNAHA EE WINNIPEG
2.12 AQOONSIGA CPIJ EE HORUMARINTA DALALKA
2.13 JAAMACADDA FARSAMADA TORONTO IYO BARNAAMIJKA ISLAAMKA POLOODKA EE BULSHADA
Ku saabsan Fulinta Maalgelinta Deeqaha Dowladda Kanada
Qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee halkan ku taxan ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay liistadayada deeqaha waxbarasho ee buuxa ee Kanada.
Waa inaad ogaataa inaan sidoo kale diyaarinay liistada deeqaha waxbarasho ee ugu dambeeya ee Kanada iyo waliba liis kale oo gooni ah deeqaha waxbarasho ee ugufiican Kanada.
Kahor intaanan bilaabin liistada deeqdan waxbarasho ee sida buuxda loo maalgeliyo ee ay bixiso dawladda Kanada oo ay weheliso hay'ado kale, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo;
Ma ogtahay dukumiintiyada lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay inaad ku dalbato deeqaha waxbarasho ee Kanada?
Ma taqaanaa sida loo codsado deeqda waxbarasho ee dawladda Kanada ama deeq waxbarasho kale oo si buuxda loo maalgeliyo oo Kanada ku taal?
Hagaag, waan ku farxi doonaa inaan jawaabo ka bixiyo su'aalahan haddii aanad garanayn.
Shuruudaha Codsiga Deeqda-waxbarasho ee Dawladda Kanada
Fiisaha ardayda (loogu talagalay ardayda caalamiga ah oo keliya)
Foom codsi deeq waxbarasho oo dhammaystiran
Baasaboor caalami ah ama mid caalami ah ama qaabab kale oo aqoonsi oo asal ah
Dhibcaha imtixaanka jaango'an (IELTS / TOEFL) - Waxaad ka heli kartaa koorsooyin IELTS oo bilaash ah halkan.
Warqad talobixin ah
Nuqulada qoraalka ama Dibloomaasiyiinta
Kuwani waa dukumiintiyada guud ee ay tahay inaad haysato ka hor intaadan bilaabin inaad dalbato deeq waxbarasho oo aad xasuusato inaad si toos ah ula xiriirto dugsiga aad dooratay wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan dukumiintiyada kale ee ay u baahan karaan.
Sida loo Codsado Deeqda waxbarasho ee Dawlada Kanada
Samee dhammaan cilmi-baarista lagama maarmaanka ah oo ay ku jiraan xiriir toos ah saraakiisha saxda ah ee ku saabsan barnaamijyada deeqaha waxbarasho
Fahmaan oo diyaari dhammaan shuruudaha iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah
Xulo koorsadaada iyo hay'addaada
Qaado imtixaanka aqoonta luqadda (IELTS / TOEFL)
Ku bilow arjiga deeqda waxbarasho
La kulan waqtiga kama dambeysta ah ee deeqda waxbarasho.
Deeq waxbarasho oo buuxda oo ay siiso Dowlada Kanada
(Waxaa kafaala qaaday dowladda, Hay'adaha gaarka loo leeyahay, iyo wada shaqeynta ka dhaxeysa dowladda iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay)
Deeqda waxbarasho ee MasterCard - Jaamacadda British Columbia
Lester B. Pearson Deeqaha
Jaamacadda Manitoba Scholarships
Deeqaha Waxbarashada ee Vanier Canada
Deeqda Jaamacadda York
Deeqaha Humber College College
Jaamacadda Calgary Scholarships
Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee Algonquin
Quest Jaamacadaha Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed
Deeqda waxbarasho ee CPIJ ee loogu talagay Wadamada Soo Koraysa
Jaamacadda Farshaxanka iyo Sayniska Shahaadada Dugsiga Sare ee Jaamacadda Toronto
MASTERCARD FOUNDATION SCHOLARSHIP - JAAMACADA BRITISH COLOMBIA
Hay'adda 'MasterCard foundation' waxay lashaqeysaa Jaamacadda Ingiriiska Kolombiya si ay u siiso deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo muwaadiniinta reer Kanada iyo shisheeyaha. Ardayga xiisaha lihi wuxuu doortaa goob ay doorteen ama koorso uu wax uga barto Jaamacadda Colombia.
LESTER B. DUGSIYADA Pearson
The Lester B. Pearson deeqda waxbarasho ayaa ah nooca ugu badan ka dib markii si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee dawladda Kanada oo bixiya qiyaastii 40 deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dhigata jaamacadaha ee raba inay wax ka bartaan Jaamacadda Toronto iyo haa, waxaad u tegeysaa koorso aad dooratay.
In kasta oo deeqda waxbarasho ee Lester B badiyaa loogu talagalay ardayda caalamiga ah, Ardayda Kanada waxay ka heli karaan amaahda ardayda iyo deeqaha bilaashka ah dawladda Kanada jaamacadda
JAAMACADDA DUGSIYADA MANITOBA
Deeqdan waxbarasho waxaa si buuxda loo maalgeliyaa oo la siiyaa oo keliya ardayda doonaya inay ku biiraan shahaadada Masterka ama Ph.D. barnaamijka ka socda Jaamacadda Manitoba waxaadna dooran kartaa qayb kasta oo aad dooratay.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho waxaa lagu qiimeeyaa $ 14,000 sanadkiiba 12 ama 24 bilood, illaa wadar ahaan $ 28,000 waxaana la siiyaa oo keliya masters-ka la oggolaaday ama Ph.D. ardayda.
VANIER CANADA OO AQOONSADAY DUGSIYADA
Sidoo kale loo yaqaan Vanier CGS, waa deeq waxbarasho oo dhammaystiran oo laga helo dawladda Kanada oo la siiyay labada muwaaddin ee reer Kanada iyo ardayda caalamiga ah laakiin waxaa loogu talagalay oo keliya shahaadada Masterka iyo Ph.D. barnaamijyada.
Daraasadaha takhasuska, deeqda waxbarasho waxaa lagu qiimeeyaa $ 50,000 sanadkiiba illaa 3 sano oo daraasad ah.
Deeqdan waxbarasho ayaa lagu sharfayaa Guddoomiyihii ugu horreeyay ee Faransiiska ah ee Guud ee Kanada waxayna u furan tahay helitaanka codsiyada ardayda Kanada iyo kuwa caalamiga ahba.
DUGSIYADA JAAMACADA YORK
Hoggaamiyeyaasha Caalamiga ah ee Deeqaha Berri ee la shaqeynaya Jaamacadda York waa barnaamij deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo la siiyay ardayda caalamiga ah si ay u bartaan shahaadada bachelorka ee Jaamacadda York ardayduna waxay doortaan daraasadda ay doorbidayaan.
Waxaa jira tiro deeqo waxbarasho ah oo ay heli karaan ardayda Kanada iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan Jaamacadda York. Fursadahaani deeqaha waxbarasho waa kuwo aad u ballaadhan oo ku dhowaad arday kasta oo codsanaya jaamacadda uu leeyahay qayb isaga ama iyadu ay xaq u leeyihiin inay codsadaan.
DUGSIYADA HUMBER COLLEGE
Deeqdan waxbarasho waxaa si buuxda loogu maalgeliyey ardayda caalamiga ah inay wax ku bartaan barnaamijka shahaadada Bachelor-ka ee Kanada wixii ay doortaan.
JAAMACADDA DUGSIYADA CALGARY
Ardayda caalamiga ah waxay qaadan karaan deeqdan waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda Calgary, si buuxda ayaa loo maalgeliyaa ardayduna waxay doortaan koorso waxbarasho oo ka socota koorsooyin kala duwan oo ay bixiso jaamacadda.
Deeqdan deeq-lacageedka ayaa si buuxda loo maalgeliyaa waxayna xitaa la timaaddaa gunno laakiin waxaa kaliya la siiyaa oo keliya 15 Ph.D. Ardayda Kanada iyo kuwa caalamiga ah.
ALGONQUIN COLLEGE OO AQOONSADAY DUGSIYADA
Kani waa barnaamij deeq waxbarasho oo Kanadiyaan ah oo si buuxda loo maalgeliyo una furan ardayda jinsiyad kasta si ay u bartaan koorsadooda ay doorbidaan ee kuleejka Algonquin oo ay ku helaan shahaadada bachelorka.
ISKUULKA AQOONSIYADA JAAMACADDA EE LAGU QAADO
Deeqdan waxbarasho waxaa si gaar ah loo siiyaa ardayda lagu yaqaan inay si wax ku ool ah uga qaybqaataan bulshooyinka maxalliga ah ama iskuuladooda, sidaas darteed abaalmarin ay ku guuleystaan ​​waxaa lagu siiyaa deeqdan waxbarasho si ay u bartaan shahaadada bachelorka ee koorso kasta oo ay doortaan.
Deeqdan waxbarasho ayaa si buuxda loo maalgeliyey waxayna u furan tahay ardayda jinsiyad kasta inay dalbadaan waxayna u furan tahay dhammaan noocyada shahaadada ee ah; Qalinjabiye, Shahaadada koowaad, Kulleejiye, Xirfadle, Ku Xidhan, iyo Sii wadista Waxbarashada.
AQOONSIGA CPIJ EE HORUMARINTA DALALKA
Iskaashatada Canadian ee Cadaalada Caalamiga ah (CPIJ) waxay siineysaa seddex deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo ardayda inta badan ka socota wadamada soo koraya si ay uga qeyb galaan Iskuulka Caalamiga ee Xagaaga ee Cadaalada iyo Dhibbanayaasha oo lagu qaban doono Jaamacadda Montreal
JAAMACADDA FARSAMADA TORONTO IYO BARNAAMIJKA ISLAAMKA POLOODKA EE BULSHADA
Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda dhakhaatiirta ah ee doonaya inay horumariyaan tababbarkooda ku saabsan waxbarashadooda laakiin qaybtan daraasaddan waa inay ku dhex jirtaa Kulliyadda Farshaxanka iyo Sayniska ee Jaamacadda Toronto.
Marka, kuwani waa 13 deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyey oo ay bixiso dawladda Kanada iyo ururo kale oo u qalma ardayda caalamiga ah iyo muwaadiniinta reer Kanada ee ay tahay inaad gaadho si aad u dhigato codsi.
Kanada waxaa lagu yaqaanay inay siiso dhowr fursado deeq waxbarasho muwaadiniinta iyo ardayda caalamiga ah, liisaskan aan soo diyaariyay ayaa kaa caawin doona inaad hesho waxaad raadineyso oo ah meel ku habboon inaad wax ku barato bilaash sidaa darteed ku bilow codsiyada deeqda waxbarasho sida aan kuu rajeynayo Goodluck .
Dalbo deeqda waxbarasho ee ugu wanaagsan Kanada
Dalbo deeqda waxbarasho ee ugu wanaagsan ee qalin jabinta Kanada
Eeg Jaamacadaha Kanada oo siiya deeqo waxbarasho arday kasta
Codso Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Dhibcaha Kulliyadda Real
Dalbo Barnaamijyo Degree Masters-ka Bilaashka ah oo Bilaash ah oo Bilaash ah oo Bilaash ah
deeqda waxbarasho ee dawladda Kanadadeeq waxbarasho oo buuxda oo laga helo dawladda Kanada
Previous Post:Barnaamijyada Online-ka ah ee Degree injineernimada 2 sano ah
Post Next:13 Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Cuba
Pingback: 7-da Shaqo ee ugu Sareeya Dawlada ee Bixiya Kulliyada 2021
Pingback: 27 Jaamacadood ee ugu Sarreeya Kanada oo leh Deeq -waxbarasho
June 3, 2021 at 3: 55 pm
Saibou Gabey Xaawo wuxuu leeyahay,
May 20, 2021 at 9: am 25
Bonjour faallooyinka allez vous ?? Je suis vraiment interessée par votre bourse d'etude.quels sont les documents a fournir et comment rediger la demande de la bourse.merci d'avance
Kalkidan solomon wuxuu leeyahay,
May 19, 2021 at 6: 39 pm
Waxaan rabaa in aan waxbarashada dibedda ku barto
Kernane wuxuu leeyahay,
September 1, 2020 at 5: 36 pm
EMRANATEEQ wuxuu leeyahay,
August 31, 2020 at 11: 44 pm
Ismaaciil Jibriil Ahmat wuxuu leeyahay,
August 28, 2020 at 8: 46 pm
Je suis un étudiant au tchad.je veux obtenir une bourse ku shub continuer mes études en master au Canada. S'il vous plaît aidez moi.
Ismaaciil Djibrine Ahmat wuxuu leeyahay,
August 28, 2020 at 8: 42 pm
August 30, 2020 at 7: am 57
N'hésitez pas à vous inscrire à nos notifications de bourses ici et vous serez sûr d'obtenir des mises à soc sur toute opportunité de bourse oo aan la aqbali karin.
Bouna Bouna Bachile wuxuu leeyahay,
August 28, 2020 at 6: 02 pm
Raxma Halitim wuxuu leeyahay,
August 28, 2020 at 12: 48 pm
Salaan. Magacaygu waa rahma waxaan ahay 23 sano jir ka soo jeeda aljeeriya
Anigu waxaan ahay ardayga suugaanta ee anglo-saxonne Sannadka 3aad nidaamka jaamacadda.
Waxaan helay 5 af qalaad
Waxaan ku helay imtixaankeyga ilkaha khadka tooska ah waxaan helay 69% heerkayguna waa dhexdhexaadka sare
Fadlan waxaan rabaa inaan wax ka waydiiyo deeqda waxbarasho ee suurtogalka ah in la helo?
Waxaan helay imtixaankeyga BAC sannadkanna waxaan ka qalin jebin doonaa jaamacadda waxaanan doonayaa inaan dhammaystiro leve masterka
Markaa fadlan wax macluumaad ah? Sideen ku heli karaa fiisada ardaygayga? Sideen ku garanayaa inaad iga aqbali doonto shuruud kasta oo aan sameeyo ?
Adesola Rachael wuxuu leeyahay,
May 27, 2020 at 10: 24 pm
Waxaan ahay shahaadada koowaad ee Nigeria oo raadinaya deeq waxbarasho oo bilaash ah si aan wax uga barto Kanada. Fadlan waxaan ubaahanahay ogeysiin marka la heli karo
Waad qaadan kartaa waqtiga arjiga ee kuwaan halkan ku qoran.